Free Zvitima Izvi Summer For Teenagers | Save A Train
musha > Travel Europe > Free Zvitima Izvi Summer For Teenagers
Kutanga kwazvose, pachava akasununguka nezvitima kusvika 30,000 kuyaruka chirimo ichi. Kuwanda vakasununguka matikiti vangatoona kuwedzera zvichienderana kwokudiwa. The EU anowedzera yakazivisa kuti zvichaita kuti chikumbiro kuwanikwa kuyaruka vakwegura 18 uye muduku. Nokuda nhamba rusununguko chitima matikiti, mari nokuti EU anogona pfuura 12 miriyoni pondo.
EU kupa vakasununguka nezvitima chirimo ichi.
Sei ipai pachena nezvitima matikiti?
mu 1972 chitima dzemapurisa muna Europe dzakanga dzizere vechidiki muzhizha. nekuti vols vakanga vachiri zvinodhura chaizvo panguva ino, $38 nekuti chitima ipfuure Europe zvaiita kwezva. Mukuwedzera, nezvitima usiku akaita kuti pekugara akanga inokwanisika zvikuru. wo, chitima pemipata kwaisanganisira zvose Western Europe. mu 1998 chitima pemipata iyo kusvikira panguva iyoyo aiva kuwanikwa chete vanhu pasi 26 vakanga zera racho abvisa. Interrailing yakanga isisiri inozivikanwa kudaro, uye nyika dzakatanga kunyora yavo mitengo yevatashanyi vachishandisa yavo yechitima sevhisi. Uyezve, isingadhuri Vols ipapo dzawanika chezvematongerwe vachisiya interrailing sezvo inodhura uye basa nzira kufamba Europe. Ikozvino Paramende yeEuropean yasarudza kuti inoda kutonga zvakare interrailing senzira inozivikanwa yevechidiki uye yakapa 12 miriyoni makirogiramu nokuti chirongwa.
Kuti kushandisa kuti mumwe vakasununguka matikiti, unofanira kuzviisa pasi chikumbiro chako European Youth Portal muna June. A vatongi achabva govera 15,000 vakasununguka nezvitima matikiti. Nepo yakatarwa rechipiri 15,000 matikiti kwave akazvifunga pakupedzisira kuchava novimba bhajeti uye inofambiswa kubva pakutanga 15,000 vatori. Chaiwo misi kuti pasi richava pakati June rechi12 uye June 26. Uri kodzera kushandisa kuti tikiti kana muchava 18 makore musi July 1st. 1900 ava vakasununguka nezvitima matikiti achaiswa dzinounzwa kuna British vamhan'ari. zvakafanana, Furanzi uye Jerimani will also receive 1900 matikiti. Mukupesana ne, Irish applicants will only receive 140 matikiti.
Prague kuna Berlin Zvitima
Kuti waongororwa pakati yakanakisisa mafomu pachena nezvitima unofanira kuratidza zvinotevera;
Chekutanga, kurudziro yako yekushanyira imwe nzvimbo yeEuropean Tsika Yemagariro. Mukuwedzera, iwe uchafanirwa kupindura mibvunzo maererano neEuropean Cultural Heritage saiti. Iyo quiz ichasanganisirawo mibvunzo maererano nevechidiki uye nesarudzo dzeParamende dzeEuropean.
Uyezve, you will need to express a desire to become a DiscoverEU mutumwa. chido ichi chinofanira kusanganisira kushuma kwako famba zvakaitika uye kuita mifananidzo yenyu available to DiscoverEU anniversary photo exhibition at the European Parliament.
Lyon Airport kune Nice Zvitima
Book yakachipa pashiri iripo chitima matikiti nesu
Nokuti tinoziva kuti muri kutsvaka zvakanaka mutengo saka kana iwe hauna usununguke nezvitima matikiti, isu zvakapa zvakasimba kutsvaka injini kuwana chipa chitima matikiti nokukurumidza. Tinoda here kuti afambe zvikuru uye kubhadhara zvishoma. Purchase chitima matikiti vachishandisa vakawanda kubhadhara nzira kusanganisira Credit Card, PayPal, and Alipay. Whether you are looking for nzvimbo dzokuona dzakanaka, chikafu Chakanaka, uchidanana nzendo kana mumwe chikonzero kuenda Europe, tinogona kukupa akanakisisa tikiti.
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/free-trains-summer-teens/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#vakasununguka #freetrains tikiti rechitima chitima mazano